Ballon D’or: Qiimeeyntii Ugu Dambeeysay Ee Liiska Xiddigaha Ku Tartamaya Abaalmarinta Sannadkan 2021 – Garsoore Sports
Ballon D’or: Qiimeeyntii…
Ballon D’or: Qiimeeyntii Ugu Dambeeysay Ee Liiska Xiddigaha Ku Tartamaya Abaalmarinta Sannadkan 2021
Kaddib markii la kansalay kii sannadkii hore ee 2020, Ballon d’Or waa uu soo laabtay, iyadoo xiddigaha ugu wanaagsan caalamka ay markale indhaha ku hayaan abaalmarinta shaqsiyadeed ee ugu weyn ee kubbada-cagta.
Inkastoo abaalmarinta aan la bixin doonin illaa bisha Diseembar ee dabayaaqada sannadkan, haddana bandhigyada toddobaadyada soo socda ayaa wax badan ka tari doona go’aaminta cidda tartami doonta iyo cidda aan tartami doonin.
Iyadoo tartamada kooxeed ee sannad cayaareedka 2021-2022 ay soo idlaadeen xilli tartanka Qaramada Yurub iyo Copa America ay dabayaaqo ku dhowyihiin, ciyaartooyda adduunka ugu fiican ayaa bilaabay inay soo if baxaan.
Haddaba halkan waxaan idinkugu soo gudbineynaa qiimeeynta 10ka cayaartooy ee ku tartami kara abaalmarinta Ballon D’or ee 2021.
#10 Neymar (Paris Saint-Germain)
Xilli xulka Selecao ay weli tahay kooxda ugu cadcad ee qaadi karta koobka Copa America kahor semi-finalka ayuu xiddiga PSG weli sii wadaa inuu muujiyo bandhigyo cajiib ah.
Waxaana uu qiimeeyntan kaga jiraa kaalinta 10aad.
#9 Erling Haaland (Borussia Dortmund)
Tani waxay noqon kartaa isbuucii uu Haaland weeyn lahaa lamaanihiisa weerar ee kooxda Dortmund maadaama ku biiritaankii Jadon Sancho ee Manchester United aakhirkii la isku raacay, laakiin taasi uma badna inay kahor istaagi doonto laacibka reer Norway inuu dhibaato ku noqdo difaacyada mucaaradka mar kale ololaha 2021-22.
Marka la fiiriyo sida uu u hoos ugu dhacay tartanka Ballon d’Or isbuucii la soo dhaafay, billow kulul ayaa xitaa u saamixi karta inuu ku guuleysto shanta ugu sarreysa.
#8 Raheem Sterling (Manchester City)
Laba toddobaad kahor, Sterling xitaa kuma jirin 20-ka ugu sarreeya ee Qiimeynta POWER RANKINGS, haddana wuxuu isu arkaa inuu si sax ah ugu dhex jiro tartanka Ballon D’or kaddib olole Euro 2020 oo uu si cajiib ah xulkiisa ugu hoggaaminayo tartanka xilli ay haatan soo tiigsadeen wareegga 4 dhammadka.
#7 Cristiano Ronaldo (Juventus)
Ronaldo ayaa laga yaabaa in xulkiisa lagu ciribtiray wareegga 16ka ee Euro 2020, laakiin wuxuu kusii socdaa wadadii uu ku qaadan lahaa kabaha dahabka tartanka, isaga oo caawin uu sameeyay keliya uu hoggaanka gooldhalinta uga hayo Patrik Schick kaddib markii weeraryahanka Czech Republic uu kula biiray shan gool tartanka.
Tartamayaasha ugu dhow ayaa haatan u baahan ugu yaraan labo gool si ay u soo qabtaan, xiddiga reer Portugal ayaana laga yaabaa inuu xagaaga ku dhammeysto billado shaqsiyadeed.
#6 Kevin De Bruyne (Manchester City)
Shaki la’aan waa kubbad-sameeyaha khadka-dhexe ee ugu fiican adduunka , De Bruyne wuxuu weli sii wadayaa sugitaankiisa koob qaaradeed midkood koox ama heer caalami kaddib guuldarradii Biljimka ee quarter-finalka ee Euro 2020 oo ay kasoo gaartay Talyaaniga.
Marka lagasoo tago inuu ku guuleeystay abaalmarinta cayaaryahanka sannadka ee Premier League-ga, tayada De Bruyne kaligiis ayaa wali ku ridi doonta codkiisa tartanka Ballon d’Or, xitaa haddii wax soo saarkiisa aanan lala barbar dhigi karin qaar ka mid ah tartamayaasha kale.
Afar kulan, goolal la’aan iyo rigoore la qasaariyey oo sababtay in xulkiisa uu ka haro tartanka Euro 2020 – ayaa waxay Kylian Mbappe u noqoneysaa tartan ay tahay in la iska iloobo.
Inkastoo bandhigyadiisii Camp Nou iyo Allianz Arena aanay ilaaweeynin codeeyayaasha Ballon D’or , haddana xaqiiqda ah inuu 2021 ku dhameeysanayo koob la’aan ayaa lumineysa fursadihiisa ah inuu sannadkan hanto abaalmarinta ugu wanaagsan ee cayaaryahan la guddoonsiiyo.
#4 Romelu Lukaku (Inter)
Lukaku iyo Biljim riyadoodii Euro 2020 waa ay dhammaatay, laakiin qaab ciyaareedkiisii intii uu socday tartanku wuxuu u xaqiijiyay kuwa aan daawan Inter toddobaad kasta sida uu San Siro ugu noqday weeraryahan dhammeystiran.
Doorkii uu ku lahaa in Inter ay ku guuleeysato Scudetto-da Talyaaniga sannad cayaareedkii dhowaa ayaa sharraxaad ugu filan inta uu gaari karayo marka codeeyayaasha ay isla barbardhigaan isaga iyo kuwii isku soo hara dabayaaqada sannadka.
#3 N’Golo Kante (Chelsea)
Cayaaryahanka garoonka ayuu ku guuleeystay labada lugood ee semi-finalka Champions League iyo finalka ah, Ngolo Kante weli wuxuu dib u eegi karaa sannad cayaareedka 2020-21 wuuna ku qanacsan yahay wixii u qabsoomay, inkastoo Faransiiska ay xilli hore ka hartay Euro 2020.
Inuu 3da ugu sarreeysa ku dhammeeysto Ballon d’Or waxay abaalmarin u noqon doontaa ciyaaryahankan khadka dhexe ee firfircoon.
With a host of contenders suffering earlier than predicted exits from Euro 2020, all of a sudden the Ballon d’Or race could yet be settled by the achievements of players during the club season.
Iyadoo tartamayaal badan ay la tacaalayaan inay tartanka Euro 2020 isaga hareen xilli hore , haddana tartanka loogu jiro abaalmarintan ayaa sidoo kale lagu go’aamin doonnaa waxqabadyadii cayaaryahanadda ololohoodii kooxeed.
Iyadoo taasi aan maskaxda ku heyno, Lewandows wuxuu noqonayaa musharax ugu cad-cad abaalmarintan kaddib ololihiisii rikoor jebinta ee Bundesliga iyo dareenka ah inuu si qaldan u hanan waayay billadan sannadkii hore ayaa xaaladdiisa caawin karta.
#1 Lionel Messi (Wakiil Xor Ah)
Kaddib markii ay tartamayaal badan tartanka ay hoos uga dhaceen todobaadkii tegay, waxaad ku dhowaad awooddaa inaad xaqiiqsato in markii 7aad oo uu ku guuleeysto abaalmarinta shaqsiyadeed ee ugu weyn dunidda ay tahay mid macquul weyn ah.
Bandhigyadiisii Copa America waxay ahaayeen il qabad, wuxuu dhaliyay 4 gool , 4 kalena wuu caawiyay isagoo gacan weyn ka geystay 2 gool oo xulkiisa ay wadar ahaan tartanka dhaliyeen 10 gool ilaa haatan.
Koox kama tirsano haatan maadaama uu heshiiskiisa Barcelona idlaaday, laakiin taasi kama hor joogsan Lionel Messi inuu mar kale isku muujiyo masraxyadda in uu yahay midka ugu wanaagsan dunidda.
Ribery Oo Sheegay Inuu Cayaarista Sii Wadayo
Coutinho Oo Loosoo Bandhigay Ac Milan